Uku ndiko Kutsemuka kweChirimo? | Martech Zone
Chipiri, April 3, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Vhiki rino ndiri pazororo. Zvinenge zvichindiita kuseka ndichitaura izvozvo zvinonzwika. Heano maitiro angu zororo ari kuenda kusvika ikozvino:
Anenge gumi nemaviri emasaiti angu (kana evatengi vangu saiti) ari kukwidziridzwa izvozvi. Iwo saiti ari kuendeswa kune matsva, nekukurumidza maseva neshanduro dzichangoburwa dzese software. Izvo, hongu, zvinotungamira ku DNS nyaya (yangu yepamoyo shamwari uye saiti yemutengi yakadzoserwa kune iyo spammer peji husiku hwese… ugh!), dhatabhesi yekubatanidza nyaya, vhezheni nyaya, dingindira matambudziko, plugin nyaya… unozvitumidza. Ini ndanga ndamuka kusvika 6:30 AM mangwanani ano ndichigadzirisa nyaya. Ndine imwe saiti yasara (hongu, imwe chete!).
Ndine webhusaiti yandiri kuvhura svondo rino (sezvo ini ndisina imwe nguva) izvo zvasara kumashure mukusimudzira. Nekudaro, kusvika parizvino zvaenda mushe. Ini ndakatakura bhainari yeGeographic database ye IP kero kubva kuMaxmind uye yakanyorwa kodhi inozo auto-pakati mepu zvinoenderana nemushandisi ari kushanya. Iyo yemahara vhezheni yeiyo API haina kunyatsoita mushe asi inongotungamira munhu kuenda kudunhu chairo.
Basa ratanga pakuvaka plugin yeWordPress kuti iite iyo Mushandisi Yemukati iratidze kuchena. Iko mashandiro haachinje, asi iwo maratidziro uye nekunzwa zvakagadziridzwa zvakanyanya (ona pazasi). Ndabvunza Sean kubva Geek neLaptop kundibatsira kunze. Ini ndakanaka neWP dhizaini uye yekuyambuka-browser nyaya, asi ndine chokwadi Sean anogona kuunza ino imba.
Uye zvechokwadi, vana vangu vari kumba. Mwanakomana wangu ari kugadzirira Prom uye kuenda ku Indiana University. Mwanasikana wangu ari mu "girlfriend mode" yakazara saka foni iri kurira isingamire nevechidiki vari kumhanya vachipinda nekubuda kunge iri Grand Central Station. Ndave kuda kusvetuka nepahwindo! Neraki, ini ndiri padhoro repiri.
Wedzera pane izvi kuti ini ndinoshuvira kukwidziridzira kubvunza kwangu (ndakatora zvakatemwa pagore mumari gore rapfuura pasina izvozvo) saka vhiki rangu rizere nekufona uye masikati.
Zviri sei pazororo? Ini handigoni kumirira kuti ndidzokere kubasa kuti ndiwane kuzorora! (Kwete!)
Zvinonzwika kunge zororo rangu.
Vana vangu vari kumba vhiki ino, zvakare. Ndiro zororo re * ivo * kwete ini kana mukadzi wangu 🙂
Hei Doug, tichitarisira kushanda newe pane admin plugin.
Ndakaita boka retsika WP plugins yevanhu asi handina kumboburitsa imwe kuruzhinji asi izvo zviri kuda kuchinja mumazuva anouya munguva pfupi pandinoimhanyisa nemimwe bvunzo.
Kana purogiramu yako… uh, nguva yezororo ichibvumidza 🙂 Ndingafarire kuti iwe ukande matai ari pairi.
Kundiita kwako chinhu kana ndichifanira kufungisisa zororo rangu! Vana vachakutyaira iwe nzungu!
Ndingafarire chaizvo iyo WordPress plugin yawataura. Zvingave zvisinganzwisisike kuti zvese nezve WP matombo kunze kwekutumira interface! Dambudziko rangu nazvo nderekuti rakanyongana, uye haugone kubvisa marara uye tarisa pane zvawanyora.